रेमिट्यान्सबाट लोभिने कि जोगिने ! | paniphoto
रेमिट्यान्सबाट लोभिने कि जोगिने !
दिपध्वनी	January 17, 2013	Post navigation
तस्विर साभार : ibexmag.com-रामजी बलामी-
मुलुकमा उपयुक्त रोजगारको अवसर नहुनु र काम अनुसारको दाम नपाउँनुले अधिकांश नेपालीको अन्तिम गन्तब्य बनेको छ वैदेशिक रोजगारी । विभिन्न मुलुकमा गरी दैनिक लगभग एक हजार नेपाली विदेशीरहेको छन । अवसरको खोजीमा भौतारिदै विदेशिएका दाजुभाई दिदीबहिनीहरुले पठाएको कमाई नै रेमिट्यान्स हो । यसरी आएका रेमिट्यान्सको उचित सदुपयोग हुन सकेको छैन जसले दिर्घकालमा नकारात्मक असर पार्ने प्रवल संभावना रहन्छ । यी रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेको छैन । यस्तो रेमिट्यान्सहरु व्यक्तिगत उपभोग्य क्षेत्रमा मात्रै प्रयोग भईरहेका छन । यसले गर्दा व्यक्तिगत जीवनमा उत्थानको लक्षण देखा परे पनि राष्ट्यि रुपमा घातक देखिन्छ । यसरी हेर्दा क्षणिक रुपमा यसले केही लाभदायक भूमिका निर्वाह गरेपनि उल्लेख्य उपलब्धि भने हासिल हुन सक्दैन । विश्व बैंकले सन् २००९ मा करिब ३ हजार २ सय घरपरिवार समेटेर गरेको सर्वेक्षणमा नेपालका कुल घरपरिवारको कुल आयको ३० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा विदेशबाट प्राप्त हुने विप्रेषणमा आधारित भएको पाइएको थियो । ‘नेपाल माइग्रेसन’ नाम दिएर गरिएको उक्त सर्वेक्षणमा नौ वटा जिल्लाको पारिवारिक आयमा विप्रेषणको योगदान १० प्रतिशत भन्दा कम देखिएको थियो । हाल वितेको दुई वर्षमा बिदेशीएकाहरुको संख्या बढ्नुले यो संख्यामा पनि वृद्धि आउँने निश्चित नै छ । कुनै पनि नेपाली रहरले विदेशिएका छैनन् हातमुख जोर्नकै लागि विदेशीनु पर्ने नेपालीहरुको नियतलाई हेर्दा बिना सरकारको मुलुकसरह बन्न पुगेको छ नेपाल । हामी यहाँको कच्चा सामाग्री सस्तोमा निर्यात गर्छौ अनि महंगो मूल्यमा तयारी माल सामान आपुर्ती गर्छौ । आकर्षक र महंगो सामान भने पछि उच्च गुणस्तरको भन्ने सोच्छौ हामी । यहांको स्वदेशी उत्पादनलाई धिक्कार्दै फेसनेवलको नाममा विदेशी सामान किन्न आत्तुर हुन्छौ । जसले गर्दा धमाधम स्वदेशी उत्पादकहरुले उत्पादनबाट हात झिकिरहेका छन । यहि कारण कयौले रोजगारी गुमाईरहेका छन । आकर्षक र प्रचारको भरमा विदेशी सामानप्रती लोभिनु स्वदेशी उद्योगकोलागि घाटा पुर्रयाउँनु हो । जब सम्म स्वदेशी उद्योगको विकास र विस्तारमा सरकारले ध्यान दिदैन तव सम्म मुलुकको आर्थिक अवस्था कुनै हालतमा सुध्रिदैन । यसरी धमाधम स्वदेशी उद्योगहरु बन्द हुनु र लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसक्नुले नै बेरोजगारको मात्रामा वृद्धी भएको हो ।
तस्विर साभार : apifinance.comअहिले २१ लाखभन्दा बढी नेपाली युवाहरुले कानुनीरुपमा वैदेशिक रोजगारी मा गएर रेमिट्यान्स भित्र्याइरहेको अनुमान छ । यतिकै मात्रामा अवैध रुपमा विदेशिने अनुमान छ । यसरी कानुनी तथा गैरकानुनी रुपमा काम गर्ने नेपालीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सबाट धानेको छ मुलुकको अर्थतन्त्र । बैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरुले रेमिट्यान्सवापत वार्षिकरुपमा करिब २ अर्ब ५० करोड डलर बराबर रकम भित्र्याउने गरेको तथ्यांक छ । यो नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब २५ प्रतिशत हो । यसरी हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सप्रति नै लोभिन गएको भान हुन थालेको छ ।
राजनीतिमा छाएको कालो बादलका कारण मुलुकका हरेक क्षेत्र लथालिंग अवस्थामा पुगेका छन् जसले गर्दा यहाँ भएका स्रोत-साधनहरुको समेत सदुपयोग हुन सकेको छैन । स्रोत साधनको दुरुपयोग तथा लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना हुन नसकेकाले नै रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको हो । पछिल्लो पटक सार्वजनिक प्रतिवेदनहरुले विगतका वर्षहरुमा भन्दा हाल नेपालको लगानी वातावरणमा सुधार आएको देखाएको छ । तै पनि आवश्यकता अनुरुप लगानीकर्ताहरु उत्साहित बन्न सकेका छैनन् । लगानीविना उत्पादन र उत्पादनविना रोजगार असंभव हुन्छ । उत्पादनदेखि विक्री सम्मको जीवनचक्रलाई चलायमान बनाउँन सव्रप्रथम लगानीमैत्री वातावरण निमार्ण हुनुपर्छ । यसकालागि सर्वप्रथम मुलुकमा स्थायी शान्ति कायम हुनुपर्छ अनि मात्रै लगानीमैत्री वातावरण स्थापित भई नयाँ रोजगारीका आधार सिर्जना हुन सक्छ ।
एकातिर लगानीमैत्री वातावरण नहुनु अर्को तिर उत्पादक तथा उत्पादित वस्तुप्रती सरकारी नजर सकारात्मक हुन नसक्नु जसले गर्दा नेपालमा बेरोजगारको मात्रा बढ्न गएको हो । यसका लागि स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन हुने खालका नीति निमार्ण गर्नुको साथै सोही किसिमका कार्यविधि तयार गर्नु पर्छ । जब सम्म स्वदेशी पुँजीलाई स्वदेशमा लगानी गर्न सकिँदैन तव सम्म बेरोजगारलाई न्यूनिकरण गर्न सम्भव छैन । त्यसो त बेरोजगार न्यूनिकरणविना मुलुकको विकास संभव छैन । हालैको अनुपातमा नेपाली श्रमशक्तिलाई विदेशमा धमाधम निर्यात गर्दै रेमिट्यान्सको लाभमा चुर्लुम्म डुब्ने हो भने केही समयमै मुलुक ठूलो भड्खालोमा फस्ने निश्चित छ । त्यसैले मुलुकलाई यस्तो भड्खालोमा पर्नबाट जोगाउनकालागि सर्वप्रथम त मुलुकभित्रै रोजगारका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ त्यसका लागि लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्नु जरुरी छ । Tweet
This entry was posted in खुल्ला बहस and tagged nepali remittance company, remittance company logo, remittance earning in nepal, remittance in nepal, रेमिट्यान्सबाट लोभिने कि जोगिने !. Bookmark the permalink.	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)